KORMAMMUU/Common warts- – Chala Dandessa Debela
Date: May 16, 2017Author: The Page Admin 0 Comments
kormammuun kan namati dhufu vaayrasii “Human papilloma virus,HPV” jedhamuudhani. Tuttuqiidhaan nama qaba, keessumatuu qaama saalarraa. Yeroo baay’ee qubaa fi harkarratti kan bahuu yoo ta’u;darbe darbee fuula,luka ,naannoo qaama saalaa fi iddoo birootis bahuu danda’a.
kormammuu balleesuuf malootni salphan manuma keenyati yaalu dandeenyu ni jiru. Akka madda odeeffannoo kiyyaatti namootni kormammuu qaban baay’een maloota kanneeniin fayyadamani akka ofirra balleessu danda’aniidha. Maree isinis kormammuu qabdu yoo ta’e salphumatti mana keessanitti maloota kana keessaa kan isiniif mijatu yaalaato of gargaaraa.
>kan barbadamu quuncee/qola muuziiti. Galgala galgala quuncee muuzii kanaan iddoo kormammuu itti argamutti sirriti rirrita(rub). haala kanaan torban lamaaf yoo itti fuftan jijjirama gaarii argituu.
2.Damma qulquulluu/pure raw honey
>Damma qulquulluu iddoo kormammuu qabdaniti dibuun waan akka peestaaliitin hidha bulcha ykn jirbii irra ka’aa hidha. haala kanaan hanga isinirra baduutti itti fufaa.
>Acheetoo suuqii fi” super market” dha ni argatu. Acheetoo keessa jirbii cuuphaa
kormammuu irratti hidhatoo bulcha. Ganama ofirra dhiqaa. Kanas hanga jijjirama barbadan argattanitti itti fufa.
>Qullubbii adii quuncistanii erga qopheessitanii booda daakkudhan ykn bulleessuudhan kormammuurra ka’ato irratti hidha bulcha. Ganama ofirra dhiqaa. haaluma kanaan hanga jijjirrama argattanitti itti fufa.
**Maloota kanaan fayyadamtanii tarii yoo isin irra baduu dide fi isin dhiphisa ta’e ogeessa fayyaa mari’achiisuun dandeessu. Rakkoo biroos waan ta’uu danda’uuf keessumatuu yoo dhukkubii eegale fi halluu jijjirrate.
Previous Previous post: Afro-Colombians Face Genocidal Attacks from United States-Backed Death Squads – Atlanta Black Star
Next Next post: 100 Fully Funded Knight Hennessy Scholars Program for International Students at Stanford University in USA, 2017